Kutheni i-mini MBA ingeyiyo enye ikhosi yeshishini? 2022
Novemba 9, 2020 SAN
Kutheni i-mini MBA hayi enye ikhosi yeshishini?
Nali inqaku elibhalwe kakuhle nguDeblina Dam malunga nokuba kutheni inkqubo encinci ye-MBA inokuba yile nto uyifunayo ngoku endaweni ye-MBA yesiqhelo.
Izinto zeshishini zokuqala ezifunga ngethiyori zeshishini zakudala zinokuthi zityhalelwe kwinqanaba lokuqhubela phambili. Enkosi ngokunyuka kweenkqubo ezincinci ze-MBA, iziporho zeshishini ngoku zinendlela yokufumana izakhono zolawulo lweshishini lobuchwephesha ngaphandle kwexesha. Funda kwangaphambili ukufumanisa ukuba kutheni usenza njalo khetha i-MBA encinci ngaphezulu kwe-MBA yesiqhelo ngekamva eliqaqambileyo.
Ithathelwe ingqalelo lukhetho olufanelekileyo lokujonga ithiyori yamashishini kunye nokuziqhelanisa kunye nokuphakamisa ikhondo lakho lomsebenzi, konke ngendlela efanelekileyo. Elona candelo lililo? I-MBA encinci yeyona ndlela iqinisekileyo yokufumana ukuqonda okunzulu kokusebenza okuntsonkothileyo kweshishini kunye nokukhula okuzinzileyo ngokuhamba kwexesha, ngalo ndlela kuphuculwe inzuzo ngaxeshanye.
Kutheni le nto kufuneka ulandele inkqubo encinci ye-MBA?
Le nkqubo ye-MBA yenzelwe iingcali zeshishini. Inomxholo osebenzisanayo kunye nomxholo okhethekileyo onxulumene nemisebenzi yakutshanje kwimarike. I-Mini-MBA iza ngexabiso eliphantsi xa ithelekiswa neenkqubo zolawulo lweshishini eziqhelekileyo, ukubonelela ngembuyekezo ekhawulezileyo kutyalo-mali lwezifundo.
Yintoni enye ekufuneka uyazi? Ewe, inye into. Le nkqubo inikwe iingcali zeshishini ezikumgangatho ophezulu kunye neengcali ezigqwesileyo, ivumela abasebenzi ukuba bagcine izakhono zabo ezifanelekileyo kulindelo lomqeshi wabo. Ikharityhulam efunekayo kwaye ikulungele ukuvumela ukuba ufunde naphi na, nangaliphi na ixesha. Ukongeza, uvavanyo olunxibelelanayo kunye nezifundo zevidiyo ezizimeleyo zinceda abasebenzi abaxakeke ngumsebenzi ukugcina impilo esempilweni.
Uya kufumana ukufikelela ekukhupheleni izixhobo zokufunda kwi-Intanethi ukuze zisetyenziswe kwixesha elizayo. Nazi izibonelelo zokwenyani ezinokufunyanwa ngabafundi ngokufumana inkqubo encinci ye-MBA:
Ukhetho lokuvavanya izimvo ezintsha ngoncedo lwabahlohli kunye noontanga;
Chonga indawo yakho yobuthathaka kwaye ulungiselele ukuphuculwa okujolise kuko;
Thathela ingqalelo ulindelo lwabaviwa ngabanye;
Ukuphucula izicwangciso ezahlukeneyo zokufumana ukukhuthazwa kweengcamango ezintsha zokuseka amashishini;
Nweba mathuba o kunxibelelana uze neendlela ezizezinye zokuqhuba inkampani;
Ukunika iingcebiso kumalungu oshishino onamava kunye neemodyuli ezifundiswe ngabahlohli abanamava amakhulu oshishino;
Hlaziya izakhono zakho kwaye ujolise kulwakhiwo lwemali entsonkothileyo;
Hlala unolwazi malunga neendlela zamva nje kurhwebo lwamanye amazwe;
Fumana isiseko esifanelekileyo kubuchule bakho beshishini kunye noshishino;
Ukufezekisa ubuchule obutsha, ubuchule kunye nobuchule bobuchule.
Iinkqubo ezincinci ze-MBA ziya zithandwa njengoko zizezona ndlela zilungileyo zoosomashishini zokubeka isiseko esomeleleyo senkqubo yamashishini yakutshanje kunye ithiyori. Ezi nkqubo zikhethekileyo zifaneleke kakhulu kubantu abanqwenela ukuzifaka ngokwabo izakhono zolawulo lweshishini, ezinokuthi zikhokelele ekusekweni kwamashishini abo.
Ewe kunjalo, konke oku kundikhokelela ekucebiseni ukuba ukhethe i-MBA encinci ngaphezulu kwesiqhelo MBA ukuba ufuna indlela entsha yokufumana izakhono zeshishini. Thatha inyathelo eliya phambili lokuxubha kwiinkqubo zeshishini zale mihla, ukufumana amaqhinga amatsha eshishini, okanye ukuzilungiselela ukufaka isicelo senkqubo ye-MBA yexesha elizeleyo. Thumela kwizicelo zakho namhlanje kwaye uthathe ithuba kuluhlu olubanzi lobuchwephesha obukhoyo!
Post Previous:Izidingo zokungeniswa kwiYunivesithi yaseMcMaster | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Okulandelayo Post:Izidingo zeDyunivesithi yaseDalhousie | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla